नेकपा आधिकारिकता विवादः कानूनले के भन्छ ? ~ Canadanepal.net
नेकपा आधिकारिकता विवादः कानूनले के भन्छ ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को आधिकारिकताको विवाद सुरु भएको छ । पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नै भएको दुबै पक्षले दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो समूह नै आधिकारिक भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । यसको छिनोफानोका लागि आयोगले तयारी पनि थालेको छ । उनीहरुका आ–आफ्नो दाबीबारे अध्ययन गरेर ऐन÷कानूनमा रहेको व्यवस्थाका आधारमा आयोगले आधिकारिकताबारे निर्णय गर्ने छ ।